Iindaba-Uyifaka njani i-Acrylic Mirror Sheet
Iphepha lesipili le-Acrylic lenza ulongezo olusebenzayo kunye oluhle kwiindonga, iingcango, ukungena kunye nokunye, ukongeza ukubamba okwangoku kuyo nayiphi na indawo oyifakayo. ubunzima. Inokunqunyulwa ngokulula kwaye ibunjwe ukuze ilingane imilo ethile, okuthetha ukuba ungafaka amaphepha amaninzi amakhulu kwisiteyitimenti sodonga lwesipili okanye ufake nje iziqwenga ezincinci zecala le-kaleidoscopic. Iphepha lesipili le-Acrylic likwimo ebhetyebhetye kuneglasi, oko kuthetha ukuba inokuthi ihambelane nazo naziphi na izitenxo ezikhoyo kumphezulu wokuncamathelisa kuwo. Ukuba ufuna ukushenxisa naliphi na ithuba lokugqwetha, yiya kwi-acrylic ejiyileyo, njengoko ingena bhetyebhetye kwaye inesidima sombane.
Ukuba ufuna ukufaka iphepha lesipili le-acrylic ekhayeni lakho okanye kwishishini, landela ezi ngcebiso zingezantsi ukuze uqiniseke ukuba ufakelo lwakho luhamba kakuhle.
Ngaphambi kokuba ubeke i-acrylic sheet sheet yakho phezulu, kufuneka ulungiselele indawo yakho yomsebenzi:
• Linganisa indawo oyincamathisela i-acrylic ngokuchanekileyo- ngelixa eli licebo elicacileyo, kubalulekile ukwenza oku ngokufanelekileyo ukuze ufakelo lwakho lonke luhambe kakuhle.
• Thabatha i-3mm kwimitha nganye kwimilinganiselo - umzekelo, ukuba umphezulu ubuyi-2m x 8m, ubunokuthabatha i-6mm kwicala leemitha ezi-3 kunye nama-24mm kwicala leemitha ezisisi-8. Inani elikhokelela kubungakanani obufuna ukuba liphepha lakho le-acrylic.
• Gcina umaleko we-polyethylene oluza nephepha le-acrylic ukuze uqiniseke ukuba awonakalisi okanye awunabala ngexesha lenkqubo yofakelo.
• Phawula apho kufuneka usombele khona, usike okanye ubone iphepha lakho ukuze lenze ubungakanani obuchanekileyo. Yenza oku kwifilimu yokukhusela, hayi kwiphepha le-acrylic.
• Ukuba usika iphepha lakho le-acrylic kubungakanani, qiniseka ukuba icala elibonisiweyo kunye nefilimu ekhuselayo ijonge kuwe, ukuze ubone ukuba ihamba njani ngexesha lenkqubo yokufaka.
Okulandelayo, kuya kufuneka ulungiselele umphezulu oza kusetyenziswa kuwo iphepha le-acrylic. Ezinye izinto ezifanelekileyo ukufaka iphepha lakho lesipili le-acrylic ukubandakanya i-gypsum engenamanzi, iithayile zesipili esisigxina, udaka, ilitye okanye udonga lwekhonkrithi, iiphaneli zephipboard kunye neephaneli ze-MDF. Ukuqinisekisa ukuba umphezulu wakho ukulungele ukufakwa, jonga ukuze ubone ukuba uthe tyaba ngokupheleleyo, ugudile kwaye awunomswakama, igrisi, uthuli okanye imichiza. Ukuqiniseka ukuba indawo oyikhethileyo inokuxhasa iphepha le-acrylic, zama ukuyicofa kwi-substrate yakho ukuze ubone ukuba ingabuxhasa ubunzima. Emva kokuba uqinisekisile ukuba umphezulu wakho unomthwalo wokuthwala umthwalo ofunekayo, ungaqala ngokuzithemba ukufakela kwakho. Landela la manyathelo alandelayo ukugcwalisa ufakelo olugudileyo:
• Susa ifilimu ekhuselayo kwicala lephepha elizakujongana nomphezulu kwaye uyihlanze nge-petroleum ether okanye i-isopropyl alcohol.
• Khetha iarhente yokubopha, enokuba yeteyiphu emacala-mbini, i-acrylic okanye i-adhesives. Ukuba usebenzisa iteyiphu, beka imitya ethe tyaba ngokulinganayo kububanzi bephepha lesipili le-acrylic.
• Bamba iphepha kwi-engile engama-45 ° apho ujonge khona. Jonga ukuze ubone ukuba wonwabile ngokupheleleyo ngolungelelwaniso, kuba eli lithuba lokugqibela lokuba ulungise nayiphi na imiba ngaphambi kokufaka iphepha kwi-substrate.
Susa iphepha kwitheyiphu yakho emacaleni ubambe umphetho wetshezi kumphezulu wakho ngecala le-45 ° efanayo. Sebenzisa inqanaba lomoya ukujonga ukuba ithe tye na eludongeni, emva koko unciphise kancinci i-engile yeshiti ukuze ibale ngokugqibeleleyo ngokuchasene ne-substrate.
Cinezela iphepha ngokuqinileyo ukuqinisekisa ukuba iteyiphu ibambelela ngokupheleleyo - qhubeka ucinezele ixesha elide njengoko ufuna ukuqiniseka ukuba ukunamathela kuthabathe ngokupheleleyo ifuthe.
• Nje ukuba iphepha likhuseleke, susa ifilimu ekhuselayo kwicala eline-mirripthi elijongene nawe ngoku.
Ngezakhono ezithile ezisisiseko somntu ophetheyo, nabani na angakwazi ukufaka isibuko esimangalisayo se-acrylic kwikhaya labo, kwishishini okanye kwipropathi yotyalo-mali. Yongeza isipili sesitatimende kwigumbi lakho lokuhlambela, uhombiso olubonisa kwigumbi lakho lokulala okanye wongeze ukukhanya kokuqaqamba nakweyiphi na enye indawo yesakhiwo sakho ngokufaka eyakho i-acrylic mirror sheet enkosi kwezi ngcebiso zingasentla!
Uyifaka njani i-acrylic sheet sheet. (2018, Matshi 3). Ibuyisiwe ngo-Okthobha u-4, 2020, kwihlabathi liphelahttps://www.worldclassednews.com/install-acrylic-mirror-sheet/